फेसबुकको प्रतिक्रियाहरू अब आधिकारिक छन् आईफोन समाचार
फेसबुक प्रतिक्रियाहरू अब आधिकारिक र सबैको लागि उपलब्ध छन्
आज एक दिन हो जुन एक युगको अन्त्य हो भनेर चिह्नित गर्दछ: आजदेखि नयाँ फेसबुक प्रतिक्रिया आधिकारिक बन्छ र हामी अब प्रख्यात लाइक वा प्रयोग गर्न सीमित छैनौं जस्तै। र के यो धेरै वर्षको लागि, प्रकाशनमा प्रतिक्रिया गर्ने एक मात्र तरिका लाइक बटन रहेको छ। लामो समयदेखि, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्कका प्रयोगकर्ताहरूले केहि चीजसँग असहमति जनाउन बटन भन्दा कम के माग्दै थिए जुन "मलाई यो मनपर्दैन" भनेर चिनिन्छ। फेसबुकले यी प्रयोगकर्ताहरूको बिन्ती सुनेको छ र धेरै बटनहरू सुरू गरेको छ।
नयाँ प्रतिक्रियाहरू मूल रूपमा लाइक बटनको एक्स्टेन्सन हुनेछ जुन अहिले सम्म उपलब्ध थियो। अब, थम्ब्स-अप बटनको थपमा, त्यहाँ पनि उपलब्ध हुनेछ प्रेम, हाँसो, अचम्म, दु: खी र क्रोधित। नयाँ प्रतिक्रियाहरू एनिमेटेड इमोजी द्वारा प्रतिनिधित्व गरिनेछ, प्रेम बाहेक जुन हृदयले प्रतिनिधित्व गर्दछ। ती मध्ये तपाईले यस लेखको हेराइमा रहेको छविमा देख्न सक्नुहुनेछ, "य" भन्नुहुने एक कम्तिमा पनि उपलब्ध हुँदैन, किनकि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई भ्रमित गर्दछ र कहिले प्रयोग गर्ने राम्रोसँग जान्दैन।
पाँच फेसबुक प्रतिक्रियाहरू जुन फेमस लाइकमा थप्दछन्
नयाँ प्रतिक्रियाहरू पहुँच गर्नका लागि तपाईले गर्न अनिवार्य छ प्रतिक्रिया बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्जुन मलाई मनपर्दछ, स्लाइड गर्नुहोस् जुन हामी प्रयोग गर्न र रिलिज गर्न चाहन्छौं। यदि पोष्टमा धेरै फरक प्रतिक्रियाहरू छन् भने, हामी ती तीनलाई हेर्नेछौं जुन सब भन्दा बढी प्रयोग भएको छ। तलका भिडियोमा तपाईं कसरी फरक प्रतिक्रियाहरू पहुँच गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ।
कुन प्रतिक्रिया सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नका लागि कुन आईकनलाई अधिक प्रयोग गरिएको थियो भनेर फेसबुक ले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जब तिनीहरू संख्या reduce मा कम गर्न सफल भए, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्कले तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न शुरू गर्‍यो। यो पछिल्लाका लागि हो कि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यी नयाँ प्रतिक्रियाहरू पहिल्यै प्रयोग गरिसकेका छन्, तर यो आज सम्म थिएन कि तिनीहरूलाई आधिकारिक बनाइएको छ र सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। वास्तवमा, फेसबुक अनुसार मात्र कुल सात देशहरूमा परीक्षण गरिएको थियो.
कुनै श doubt्का बिना, यो नवीनता सामाजिक नेटवर्क को धेरै प्रयोगकर्ताहरु को लागी धेरै स्वागत छ। यसले कसैलाई पोष्ट गर्न कुनै अर्थ राख्दैन, उदाहरणका लागि, आफन्तको मृत्यु र हामीलाई लाइक बटन क्लिक गर्न। अब यदि कसैले केहि प्रकाशित गर्छ जुन हामीलाई मनपर्दैन, हामी निश्चित रूपमा उनीहरूलाई थाहा दिनेछौं।
के तपाईंले नयाँ प्रतिक्रियाहरू पहिल्यै प्रयास गर्नुभएको छ? तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » फेसबुक प्रतिक्रियाहरू अब आधिकारिक र सबैको लागि उपलब्ध छन्
र भिडियो? किनभने प्रतिक्रियाहरू मलाई देखा पर्दैन
Yandel लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, Yandel। दोस्रो हेडलाईन पछि पहिलो अनुच्छेद मुनि एक भिडियो छ। यो सानो छ, तर म यो देख्छु।
आइओएसमा अझै बाहिर आउँदैन ???
आईफोन seसेका पहिलो छविहरू थ्रीडी डिजाइनको रूपमा देखा पर्दछन्
आईओएस adop अपनाउने दर समर्थित उपकरणहरूको% 9% मा स्टालहरू